Politika momba ny tsiambaratelo ▷ ➡️ mpanaraka ▷ ➡️
Ho an'ny tanjon'ny fepetra voalaza ao amin'ny lalàna voalaza etsy ambony momba ny fiarovana ny angon-drakitra manokana, ny angona manokana alefanao aminay dia hampidirina ao anaty fisie "USERS OF THE WEBSITE and SUBSCRIBERS", tompon'ny Online SL. Ity rakitra ity dia nampihatra ny fepetra fiarovana ara-teknika sy ara-pitantanana rehetra napetraka tao amin'ny didim-panjakana faha-1720/2007, momba ny fampandrosoana ny LOPD.
Ny fandefasana angon-drakitra manokana amin'ity tranokala ity dia tsy maintsy atao raha te hifandray, hanome hevitra, hisoratra anarana amin'ireo mpanaraka bilaogy. Amin'ny Internet, hanaovan-tsonia ny serivisy aseho amin'ity tranonkala ity ary hividy ireo boky amin'ny endrika nomerika.
followers.online dia hanangona ny data manokana an'ny mpampiasa, amin'ny alàlan'ny endrika an-tserasera, amin'ny Internet. Ny angon-drakitra manokana voangona, miankina amin'ny tranga tsirairay dia, anisany: ny anarana, ny anarana, ny mailaka ary ny fidirana fidirana. Ary koa, raha ny serivisy fifanarahana, fividianana boky sy doka, dia hangataka amin'ny mpampiasa aho amin'ny fampahalalana momba ny banky na fandoavam-bola
Raha hamaly ny zavatra takian'ny mpampiasa: Ohatra, raha mamela ny mombamomba azy ireo amin'ny endrika mifandraika ny mpampiasa, dia azonay ampiasaina ity fampahalalana ity hamaly ny fangatahanao ary hamaly ny fisalasalana, fitarainana, fanehoan-kevitra na ahiahy mety hitranga. dia mifandraika amin'ny fampahalalana tafiditra ao amin'ny tranokala, ny serivisy omena amin'ny alàlan'ny tranokala, ny fanodinana ny angon-drakitrao manokana, ny fanontaniana momba ireo lahatsoratra ara-dalàna tafiditra ao amin'ny tranokala, ary koa ireo fangatahana hafa mety anananao.
Mampandanjalanja sy mamaly ireo fanehoan-kevitra nataon'ny mpampiasa tao amin'ny bilaogy.
Mba hanomezana tolotra tena ilaina amin'ny fampandrosoana ny asany, Online SL mizara angon-drakitra amin'ireto mpanome manaraka ireto ao anatin'ny fepetra manokana momba azy ireo.
Ny mpampiasa dia manan-jo hanafoana ny faneken'izy ireo alohan'ny fotoana na amin'ny fotoana inona.
Rafitra hanangonana ny mombamomba anao ampiasain'ny mpanaraka.online :
Rehefa mampiasa ny serivisy ao amin'ny sehatra MailChimp hitantanana ny fampielezan-kevitra amin'ny marketing mailaka, ny fanaraha-maso ny famandrihana ary ny fandefasana fantsom-baovao dia tokony ho fantatrao izany MailChimp Manana mpizara any Etazonia misy ny mpizara ary noho izany ny angon-drakinao manokana afindra amin'ny sehatra iraisam-pirenena izy ireo any amin'ny firenena izay heverina ho tsy azo antoka aorian'ny fanonganana ny Harbour Safe. Amin'ny alàlan'ny fanaovana famandrihana dia manaiky ianao ary manaiky ny angon-drakinao izay natolotry ny sehatra MailChimp, miorina any Etazonia, mba hitantanana ny fandefasana ireo loham-baovao mifandraika amin'izany. MailChimp mampifanaraka amin'ireo fehezan-dalàna manara-penitra ny EU momba ny fiarovana ny angona.
Namidy boky: Amin'ny alalàn'ny vavahadin-tserasera dia azonao atao ny mividy zavatra vita an-tsoratra sy infoproduct amin'ny Online SL, amin'ity tranga ity dia takiana ny angon-drakitra (anarana, solon'anarana, telefaona, adiresy paositra ary e-.mail) amin'ny alàlan'ny sehatra Paypal ho toy ny endrika fandoavam-bola .
Azon'ny mpampiasa atao unsubscribe amin'ny fotoana rehetra ny serivisy natolotry ny mpanaraka.nomeza alàlan'ny Gazety iray ihany.
Ao amin'ny mpanaraka.online dia mandinika ihany koa ny safidin'ny mpampiasa azy izahay, ny toetrany amin'ny demografika, ny lamin'ny fifamoivoizany, ary ny fampahalalana hafa miaraka hahafantaranay tsara hoe iza ny mpihaino anay ary inona no ilain'izy ireo. Ny fanarahana ny safidin'ny mpampiasa anay dia manampy anay hampiseho aminao ireo doka ilaina indrindra.
Ny mpampiasa ary, amin'ny ankapobeny, olona voajanahary na ara-dalàna, dia afaka manangana rohy hyperlink na fitaovana fampifandraisana (ohatra, rohy na bokotra) avy amin'ny tranonkalany mankany amin'ny mpanaraka.online (ny "Hyperlink"). Ny fametrahana ny Hyperlink dia tsy midika velively amin'ny fisian'ny fifandraisana misy eo amin'ny mpanaraka.online sy ny tompon'ny tranokala na ny pejin-tranonkala niorenan'ny Hyperlink, na ny fanekena na fankatoavana avy amin'ny mpanaraka.nondro ny atiny na tolotra. Na izany na tsy izany, ny mpanaraka.online dia manan-jo handrara na hanafoana ny rohy mankany amin'ny tranokala amin'ny fotoana rehetra.
Azon'ny mpampiasa atao unsubscribe amin'ny fotoana rehetra amin'ireo serivisy nomen'ny mpanaraka.online ilay gazety.
Ny mpampiasa dia manome antoka fa ny angona manokana omena amin'ny alàlan'ny endrika samihafa dia marina, ka voatery hampita ny fanovana azy. Toy izany koa, ny Mpampiasa dia manome antoka fa ny fampahalalana rehetra omena dia mifanaraka amin'ny toe-javatra misy azy ireo, fa vaovao sy marina izany. Ho fanampin'izany, ny mpampiasa dia manolo-tena hitazona ny angon-drakitra fanavaozany amin'ny fotoana rehetra, tompon'andraikitra amin'ny tsy fahatokisana na ny lainga momba ny angon-drakitra omena sy ny fahasimbana mety haterak'izany amin'ny Online SL amin'ny maha-tompon'ny mpanaraka tranonkala.
Azonao atao ny mitarika ny serasera sy mampihatra ny zon'ny fidirana, fanitsiana, fanafoanana sy fanoherana amin'ny alàlan'ny paositra ao amin'ny. na amin'ny mailaka: info (at) followers.online miaraka amin'ny porofo manamarina ao amin'ny lalàna, toy ny photocopy an'ny DNI na mitovy aminy, izay manondro ny lohahevitra "PROTECTION DATA".
Ny mpampiasa dia nanambara fa nampahafantarina azy ireo ny fepetra momba ny fiarovana ny angon-drakitra manokana, ny fanekena sy ny fanekena ny fitsaboana azy amin'ny Internet SL amin'ny fomba sy ny tanjona voalaza ao amin'ny fampandrenesana ara-dalàna.
Online SL dia manana zo hanova izany politika izany hampifanaraka azy amin'ny lalàna vaovao na fitsarana ara-dalàna ary koa fomba fanao amin'ny indostria. Amin'ny tranga toy izany, ny Mpanome tolotra dia hanambara amin'ity pejy ity ireo fanovana nampidirina am-piandrasana mialoha ny fampiharana azy ireo.
Mifanaraka amin'ny LSSICE, Online SL dia tsy manao fanao SPAM, noho izany dia tsy mandefa mailaka ara-barotra izay mbola tsy nangatahana na nomen'ny Mpampiasa alalana, amin'ny fotoana sasany, dia afaka mandefa fampiroboroboana manokana sy tolotra ho azy ary antoko fahatelo, amin'ny tranga izay ahazoanao manome alalana ireo mpandray. Vokatr'izany, isaky ny endrika atolotra ao amin'ny tranokala, ny mpampiasa dia afaka manome alalana mazava azy ireo handray ny "Gazetiko", na inona na inona fampahalalana momba ny varotra nangatahina manokana. Azonao atao ihany koa ny manafoana ny famandrihanao mandeha ho azy ao amin'ireo Gazety iray ihany.